Wajiga labaad ee shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa la guda galay – STAR FM SOMALIA
Kulamo looga arinsanayo soo xulista Ergooyinka ka qeyb galaya shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe iyo sida beelaha u qeybsanayaan ayaa ka socda magaalada Jowhar, iyadoo wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha C/raxmaan Odawaa ay shalay gelinkii dambe gaareen magaalada.
Kulamadan oo ahaa kuwo saacado qaatay ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay jadwalka uu ku soconayo howlaha maamul u sameynta labada gobol, waxaana qorshuhu yahay in ka hor inta aan bishan dhamaan ergooyinka ay dhameystiraan qorshe howleedka maamul u sameynta.
Wajiga labaad ee shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa la guda galay, iyadoo la xareyn doono ergooyinka ka qeyb galeysa shirka, kuwaasoo howshooda tahay ansixinta dastuurka uu maamulkaas yeelanayo iyo shuruucdii kale ee maamulka labada gobol.
Warar ay heleyso Jowhar.com ayaa sheegaya in kulan xalay dhex maray xubnaha saxiixayaasha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo u badan Wasiiro ay ka arinsadeen qaabka loo soo xulayo ergooyinka iyo sida beelaha u qeybsanayaan, iyadoo aanay wali kulamadaas wax natiijo ah ka soo bixin.
Inkastoo aan la soo bandhigin tirada ergooyinka ka qeyb galeysa shirka, hadana waxaa jira doodo ku aadan arrintan oo ku saabsan sida beelaha u qeybsanayaan, tirada guud ee labada gobol ku soo aadi doonto.
Wasiiru dowlaha Madaxtooyada Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah saxiixayaasha Maamulka Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo wareysi siiyay BBC-da ayaa sheegay in la guda galay wajigii labaad ee shirka, isla markaana la xareyn doono ergada shirka ka qeyb galeysa.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka oo howsha wada ayaa maanta la filayaa inay soo bandhigto tirada ergooyinka ka qeyb galeysa, qaabka beelaha u qeybsanayaan iyo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo xareeyo.
Tan iyo markii Shirka uu furay Madaxweynaha 12-kii bishan ayaa waxaa socday kulamo lagu dar dar gelinayay howlaha maamul u sameynta labada gobol, iyadoo Wasiiro ka tirsan Xukuumadda iyo howl wadeeno ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Gudaha ay ku sugnaayeen magaalada Jowhar.
Wakiilka Qaramada Midoobe ee Somaliya oo la wareegay Xafiiska Shaqada